Umqolo okhuselayo (DBs) ngabadlali abane bebhola elikhuselayo bebhola elikhutshwe ngokukhawulelwa kokupasa kuqala, kwaye kunye nenkxaso yokusebenza emva kokusongela kwepastile. Laba badlali banokuba yizinto ezingundoqo okanye ezikhuselekileyo, kwaye zenza indawo ekhuselayo ye-backfield, ibekwe ngaphaya kwe-backbackers okanye kufuphi nendawo. Iminyango ayinakuqinisekiswa ukuba amalungu angxamisekileyo kwaye akhawulezayo kwinqanaba elikhuselayo, elinoxanduva lokuthintela imidlalo emidlulileyo ende eyenzekayo ngaphaya komgca .
Yintoni ekhuselekayo Yenza ntoni?
Eyaziwa ngokubambisana njengesekondari, umqolo okhuselayo uyakha iqela elincinane ngaphakathi kweqela. Ukuzimela ngokukhawuleza, okunxulumeneyo, okwesibini kubaluleke kakhulu kwimpumelelo yeqela lebhola. Umqolo okhuselayo, okanye i-DB, kufuneka uxhumane kakuhle kunye nabahamba naye xa bekhetha amandla okupasa kweqela eliphikisayo. I-DBs kufuneka ilungelelanise njengoko isenzo sobugqwetha sisenzo sokuhamba kunye nokuguqulwa kohlobo ukuze kuqinisekiswe ukuba basesimweni esihle kakhulu sokumisa umdlalo omkhulu kumdlalo.
Uninzi lweendlela zokuzikhusela zisebenzisa ezimbini. Ezi zihlandlo zihlala zixhamla phezulu kumacala omzimba kwaye zikhokhiswa ngokubambisa abo bamkelekileyo. Injongo yabo kukufanisa ukuqhubela phambili kunye ne-receiver, kwaye uzame ukunqumla okanye ukukhawuleza ukudlula, okanye ukukhawulela ummkeli ngokukhawuleza ukuba ibhola ibanjwe ukuze akwazi ukugijima kwindawo yokuphela.
Izibini zesekondari nazo ziquka izikhuseleko ezimbini: ukhuseleko oluqinileyo kunye nokukhuseleka kokukhululeka.
Ezi zihlwele ezikhuselayo zimi phakathi kweekhonkco zekhonkco ekuqaleni komdlalo. Ukhuseleko lwamahhala luyakwazi ukulungelelanisa umdlalo okulindelekileyo, ufike phambili kumgca wokubhala xa ibhola ichithwa ukukhawulela ipastile emfutshane, okanye ukuyeka ukuza kuncedisa iindawo ezingundoqo zokuhamba. Ukhuseleko oluqinileyo , ngokuphindaphindiweyo umqolo okhudlwana kwaye wambi onamandla, lufakela icala eliqinileyo lentsimi, apho uphelo oluqinileyo luhlanganisiwe khona, kwaye luza phambili ukukhusela ngokubhekiselele kwimidlalo yokudlala.
I-Nickel neDime Formation Formation
Xa kucacile ukuba isigqeba siza kudlula ibhola, njengeemeko zesithathu ezisezantsi kunye nexesha elide, ukukhusela kunokongeza i-DB okanye amabini ekubunjweni kwayo kwinzame yokuthintela ukudlula okugqityiweyo. Imbuyiselo eyongezelelweyo kufuneka ithathe indawo enye ye- linemen okanye i-linebackers ekhuselayo kuba iqela lisaluncinci kumadoda ayi-11 ekhuselekileyo entsimini, ngoko ke umntu kufuneka aphume ukuze kubekho umqolo okhuselekileyo ongangena kuwo. Xa enye i-DB yongezwa, ipakethe ye nickel . Xa iimbali ezimbini zongezwa kubadlali abathandathu abesekondari, kubizwa ngokuba yi-dime formation.
Nangona iimbombo ezikhuselayo azizange zihlale ziqwalaselwe okanye zihlawulwe, ezinye ziye zabonakala phakathi kwabadlali abakhulu bezemidlalo. Ukhuseleko lwaseSan Francisco uRonnie Lott noDallas baxhomekeke kwiDionon Sanders yimizekelo yokumelana nokuzimela, njengokuba nguCharles Woodson, odlalele ukhuseleko kunye ne-corner corner e-Oakland naseGreen Bay.
Zindleko Kangakanani Ukudlala I-Golf Yonke
Indlela yokufumana iMincintiswano yokuSebenza ngeZakhono ezingekho phantsi
I-Amish Life kunye neNkcubeko
Funda indlela yokudibanisa "i-Prêter" (i-Loan) ngesiFrentshi
Indlela yokusebenzisa iidemon zeFrentshi zeFrentshana